Vaovao - Tetikasa fisakafoanana ao amin'ny The Disneyland Park,
Manampy an'izao tontolo izao izahay nanomboka tamin'ny 1983
Fanohanana mailaka sales@rapid-scaffold.com
Call Support 0086-18800562655
Scaffold amin'ny peratra
Rindramba vy vy
Fehikibo Birao Ringlock
Scaffold amin'ny Octagonlock
Adidy mavesatra mavesatra amin'ny Octagonlock
Fametahana birao Octagonlock
Famonoana diagonaly Octagonlock
Fehikibo Board Board
Cuplock Steel tohatra
Haky tokana Tube Tube
Haky Guardrail Frame
Fiadiana amin'ny diagonaly japoney
Sakano Frame Japoney
Euro Assembly Frame
Aluminium Robust Hatch-type
Mandehana amin'ny frame
Aluminium Board Amin'ny Hook
Birao Aluminium Miaraka amin'ny Plywood
Loaka roa sosona na zoro tokana miampita kofehy
Mpanampy adidy mavesatra
Mpanampy adidy maivana
Tetikasa fanaovana sifotra -Tomorrowland Of The Disneyland Park, Shanghai
Tomorrowland tetikasan'ny Shanghai Disneylanddia hita eo amin'ny zoro atsimo andrefan'ny valan-javaboary, mba hahavitana ao anatin'ny vanim-potoana fananganana nomanina, ny rindrina fizarazarana anatiny dia kasaina hatao miaraka amin'izay mandritra ny fametrahana MEP. Noho izany, mandray ny zanatsika isikascaffold amin'ny ringlock. Ilay scaffoldmila manome sehatra fandidiana miaraka amin'ny haavo 9m, miaraka amina lalanam-borona sy sehatra fandidiana manodidina azy. Ny habaka miasa 30cm dia takiana eo amin'ny rindrin'ny fizarazarana sy ny rindrina anatiny. Satria efa vita ny tohatra, ny arabe, ary ny lalana fialam-boly, dia tokony hialantsika ireny fitaovana ireny. 9500m³ ny refy amin'ity tetikasa ity, ary andrasana ho 15 andro ny vanim-potoana fananganana.
Nampiasa ny karazana B izahay scaffold hidin-trano ho an'ity tetikasa ity, na miaraka aminay hazo fisaka, tohatra vy sy vy vy.
Ny elanelana misy eo amin'ny fenitra dia 2m × 2m, ary ny elanelana mitsangana dia 1.5m. Ny takelaka vy manokana dia apetraka eo amin'ny sehatry ny asa ho toy ny sehatra fandidiana.
Ny olana lehibe voavahanay dia ireto manaraka ireto:
1.Manolotra sehatra fandefasana asa mirefy 9 metatra ho an'ny asa fitifirana tafo sy fametrahana ny MEP. Ny takelaka vy dia apetraka ambonin'ilay toerana izay tsy dia mahazatra loatra ny fametahana bar.
2.Ny tsipika vy manodidina dia mila haondraka, noho izany dia mila misy toerana iasana manodidina ilay faritra. Arak'izany ny zana-kazo manodidina dia rakotra vy hazo.
3. Manome toerana mety eo anelanelan'ny fisarahana anatiny sy ny sehatra fananganana. Ny fananganana ny rindrin'ny fizarazarana dia mizara ho fomba fiasa roa, dia ny fametrahana sy ny fandokoana. Ny fametrahana dia mitaky toerana malalaka eo anelanelan'ny sehatry ny fananganana sy ny fizara anatiny, raha toa kosa ny sary hosodoko dia mila manakaiky kokoa ny sehatra fananganana arak'izay azo atao. Amin'ity faritra ity dia misy elanelana lehibe eo anelanelan'ny scaffolding sy ny rindrina tany am-boalohany. Ka rehefa vita ny fametahana ireo takelaka vy, dia mampiasa fantsom-by sy mpampitohy vy izahay ho fanampiana (jereo ny sary amin'ny rindrina).
4.Fanomezana sehatra miasa ho an'ny tsiranoka amin'ny tsanganana vy eto amin'ity faritra ity. Ny famolavolana dia tsy nahitana ny sehatra fiasan'ny tsanganana vy manokana. Noho izany, tsy maintsy mampiasa ny scaffold-ntsika isika ho toy ny rafitra miteraka lehibe. Ary taty aoriana, nanangana ny sehatry ny fandidiana tamin'ny alàlan'ny fantsom-by, mpikarakara ary hazo fisaka teo amin'ny scaffold izahay.
5. tohatra roa misy fidirana amin'ny gorodona no omena.
Mitondrà fanodinana poakaty
Rahoviana torolalananatsangana, ny singa tsirairay dia tokony hisoroka ny làlan'ny fialamboly ambany, ary hamela ny toeram-piasana ho an'ny fananganana rindrina fisarahana anatiny. Ny rindrina fizarazarana anatiny dia namboarina tamin'ny haavon'ny 7,5m teo ho eo, ary ny faritra ambony dia manana toerana hampiasa ilay mpikambana poakaty. Ny scaffolding dia natao tamin'ny alàlan'ny singa 4m na 6m truss, 16 I-vy sy fantsom-by, sns.
Rehefa ampiasaina ny sombin-kazo, dia tokony hohamafisina ny vodin-tsambo, ary apetaka arakaraka ny làlan'ireo sombin-kazo ireo biriky mba hisorohana ireo sombin-kazo matevina (aseho amin'ny sary 7).
Fotoana fandefasana: Mey-07-2021
Rapid Scaffolding (Engineering) Co., Ltd. dia orinasa mitarika eo amin'ny sehatry ny scaffold any Sina. Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 2003,
Tetikasa fanaovana sifotra - Tomorrowland Of The ...
07,05,21Jona 16, 2017
Scaffolding Standard material, why we choo ...
27.04,21Jona 16, 2017
Casting kely, fahasamihafana lehibe! Fa maninona isika ...
26.04,21Jona 16, 2017
25.04,21Jona 16, 2017
Atsaharo ny filaharan'ny Scaffolding
19.04,21Jona 16, 2017